Efa misy ankehitriny ny Lingua vaovao Nubian! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2019 4:46 GMT
Miarahaba ry izao tontolo izao! Efa misy ankehitriny ny Lingua Nubian! Tsy maintsy milaza aho fa nofinofiko hatramin'ny naha-mpitantana ny Lingua ahy ny hanana ny Nubian eo amin'ny fitenintsika. Misaotra anao, Momen Talosh, noho ny fahavononanao hanara-maso ny fanombohana ny tetikasa!
Momen, izay monina ao Alexandria, no mpanorina ny fampiharana “Nubi“, fampiharana finday voalohany liana amin'ny lovan'ny Nubian ary ny fampianarana ny fiteny Nubiana amin'ny fiteniny roa (Kenzi sy Fadicca) mampiasa ny fitaovana teknolojia ampiasaina ankehitriny manerantany. Jereo ato ny momba azy!
Mitady mpandika teny sy tonian-dahatsoratra an-tsitrapo izahay mba hanampy amin'ny fandikana sy ny fitantanana ny tranonkala!
Zarazarao azafady! Ary raha liana ianao, fenoy ity fangatahana ity ary hamaly anao izahay!